၁. အတွင်းသင်္ခါရတရားတို့၌ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ သည်လည်း သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. ပြင်ပသင်္ခါရတရားတို့၌ အောက်မေ့မှု ‘သတိ’ သည်လည်း သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၃. သတိကိုကား အလုံးစုံ (စိတ်ဆုတ်နစ်ရာ စိတ်ပျံ့လွင့်ရာ) ၌ အလိုရှိအပ်ပေ၏ဟု ငါဘုရားဆို၏။
၄. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော အောက်မေ့မှု သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော အောက်မေ့မှု သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ အောက်မေ့မှု သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်၏ တည်ရာ အာရုံဖြစ်ကုန်သော (ဗောဓိပက္ခိယတရားလောကုတ္တရာ) တရားတို့သည်ရှိကုန်၏၊ ထိုတရားတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော အောက်မေ့မှု သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော အောက်မေ့မှု သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. အတွင်းသင်္ခါရတရားတို့၌ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်ခြင်း သုံးသပ်ခြင်း စုံစမ်းခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းသည်လည်း ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. ပြင်ပသင်္ခါရတရားတို့၌ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်ခြင်း သုံးသပ်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းသည်လည်း ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါ မဟုတ်။
၄. စိတ်တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ ဓမ္မဝိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန်အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော ဓမ္မဝိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဓမ္မဝိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်ကိုပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တရား၊ အပြစ်ရှိ အပြစ်မဲ့ တရား၊ အယုတ်အမြတ်တရား၊ အကျိုးတူ အဖို့ရှိသည့် အမည်း အဖြူဖြစ်သော တရားတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုတရားတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်း ပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော ဓမ္မဝိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဓမ္မဝိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. ကိုယ်၌ ဖြစ်သောအားထုတ်မှုသည်လည်း ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. စိတ်၌ ဖြစ်သောအားထုတ်မှုသည်လည်း ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါ မဟုတ်။
၄. စိတ်တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကိုပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ရှေးဦးစွာ အားထုတ်မှု ‘အာရမ္ဘဓာတ်’၊ ပျင်းရိခြင်းမှ ထွက်မြောက်မှု ‘နိက္ကမဓာတ်’၊ အဆင့်ဆင့် အားထုတ်မှု ‘ပရက္ကမဓာတ်’ တို့ ရှိကုန်၏။ ထိုအားထုတ်မှုတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဝီရိယသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန်အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. ကြံစည်မှု ‘ဝိတက်’ သုံးသပ်မှု ‘ဝိစာရ’တို့နှင့် တကွဖြစ်သော နှစ်သိမ့်မှု ‘ပီတိ’ သည်လည်းပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. ကြံစည်မှု ‘ဝိတက်’ သုံးသပ်မှု ‘ဝိစာရ’တို့ မရှိသော နှစ်သိမ့်မှု ‘ပီတိ’သည်လည်း ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါ မဟုတ်။
၄. စိတ်တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများမှုပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်၏ တည်ရာ(အာရုံ) ဖြစ်သောတရားတို့သည် ရှိကုန်၏၊ ထိုတရားတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ပီတိသမ္ဗောဇ္ဈင် ကို ပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. ကိုယ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှု ‘ကာယပဿဒ္ဓိ’သည်လည်း ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှု ‘စိတ္တပဿဒ္ဓိ’ သည်လည်း ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ် တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါမဟုတ်။
၄. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကိုပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ကိုယ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှုတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုငြိမ်းချမ်းမှုတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ပဿဒ္ဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. ကြံစည်မှု ‘ဝိတက်’ သုံးသပ်မှု ‘ဝိစာရ’ တို့နှင့် တကွဖြစ်သော တည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’သည်လည်း သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. ကြံစည်မှု ‘ဝိတက်’ သုံးသပ်မှု ‘ဝိစာရ’တို့ မရှိသော တည်ကြည်မှု ‘သမာဓိ’ သည်လည်း သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ် တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါ မဟုတ်။
၄. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင် ကိုပွါးများရန် အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကိုပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ (ကိလေသာမှ) ငြိမ်းကြောင်း သမထ၏အာရုံ၊ မပျံ့လွင့်သော သမာဓိ၏ အာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအာရုံတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော သမာဓိသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)
၁. အတွင်းသင်္ခါရတရားတို့၌ အညီအမျှ ရှုမှု ‘ဥပေက္ခာ’ သည်လည်း ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။
၂. ပြင်ပသင်္ခါရတရားတို့၌ အညီအမျှ ရှုမှု ‘ဥပေက္ခာ’ သည်လည်း ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်တည်း။ (သန ၄၆.၅၂)
၃. စိတ် တွန့်တို (ဆုတ်နစ်) သောအခါ၌ ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါ မဟုတ်။
၄. စိတ်ပျံ့လွင့်သောအခါ၌ ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများရန် အခါတည်း။ (သန ၄၆.၅၃)
၅. ရဟန်းတို့ မဖြစ်သေးသော ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကိုပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန် အကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
ရဟန်းတို့ ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်၏ တည်ရာ(အာရုံ)ဖြစ်သော တရားတို့သည် ရှိကုန်၏၊ ထိုတရားတို့၌ သင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းမှုကိုကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းပင်တည်း။ ဤသည်ကား မဖြစ်သေးသော ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပြီးသော ဥပေက္ခာသမ္ဗောဇ္ဈင်ကို ပွါးများမှု ပြည့်စုံစေရန်အကြောင်းတည်း။ (သန ၄၆.၅၁)